နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
APL-210N နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော များမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ နှင့် ခဲ့ ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် များသော တွင်dustries.AOX ပေးသွင်း အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် မြင့်သော perဘို့mance.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ providတွင်g ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ထောက်ပံ့ သို့ အားလုံး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ client များ လှည့်ပတ် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကို။
ပြွန် Entries နျ စံ: နှစ်ဦး 1/2 "NPT, option ကို: PF1 / 2A, PT1 / 2A, M20, PG13.5
1. ကုမ္ပဏီနှင့် APL-210N နီးကပ်ဘို့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း, ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာအကူးအပြောင်း
အလူမီနီ ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
APL-210N နီးကပ်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုပြောင်းဘို့ 2. လျင်မြန်စွာ cam စက်,
Proximity ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ APL-220NJ အကူးအပြောင်း
Proximity switch ကို: NAMUR
1. ကြှနျုပျတို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ APL-210N နီးကပ်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုပြောင်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါပေးသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းmaterialsï¼များအတွက်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိသည်။
2. ကျနော်တို့ပြည်နယ် R & D ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာရှိသည်, အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချောထုတ်ကုန်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Q: သင့်ရဲ့ APL-210N နီးကပ်များအတွက်အာမခံကာလရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုပြောင်းနေသနည်း
မေး: သင်၏ APL-210N နီးကပ်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုပြောင်းဘို့အသင်သည်မည်သည့်လက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
hot Tags:: နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်